Raiisul wasaare Khayre iyo wafdigiisa oo xalay casho sharaf loogu sameyeey Garoowe+sawirro – Radio Muqdisho
Raiisul wasaare Khayre iyo wafdigiisa oo xalay casho sharaf loogu sameyeey Garoowe+sawirro
adaxweynaha Dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xalay casho sharf ugu sameeyay Hotelka AJJ PALACE ee Garowe Ra’iisul-wasaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane. Xassan Cali Khayre iyo wafdigiisa oo shalay gaaray halkaasi.
Madaxweyne Gaas ayaa casho sharftan uu u sameeyay Ra’iisul-wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa iyaguna ka soo qayb galay Madaxweyne kuxigeenka Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camay, Marwada koowaad ee Puntland Marwo Hodan Siciid, Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland iyo Kuxigeenadiisa, Goloyaasha Dowlad goboleedka Puntland, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland iyo marti sharaf kale.
Sidoo kale Madaxweyne Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Ra’iisal Wasaare Khayre ayaa waxaa ay booqan doonaan xarumaha dhaqanka ee Puntlnad, iyaga oo la wadaagii doona maamuus iyo casuumadaha kale ee ugaarka ah madaxda dhaqanka Puntlnad.
Ugu dambayn, Ra’iisal Wasaare Khayre ayaa muddada uu ku joogo booqashadiisa rasmiga ah Puntlnad ayaa Waxaa uu booqan doonaa xarumaha wasaaradaha iyo hay’adaha kale Dowladda Puntland ee magaalada Garoowe.
Sidoo kale waxaa uu ka qeybgalidoona xuska sanadguuradii 20-aad ee ka soo wareegatay markii la aas aasey maamulka Puntland,taasi oo ku began 1da bisha August ee soo socota.
R/wasaare Ku-xigeenka dalka oo Muqdisho ka qeyb galay shir lagu daahfurayay Wacyigelinta cod-bixiyeyaasha Doorashooyinka+Sawirro
Mahdi Guuleed ”hadii uu dhamaado barnaaijkaan wacyigelinta waxaa ku xigto diiwaan gelinta cod-bixiyaha iyo samaynta goobihii ay cod-bixintu ka dhici lahayd”